ရုံကားများကိုဝယ်ယူနဲ့တူ, တစ်အသုံးအများဆုံး RV purchasing (အပန်းဖြေယာဉ်) သို့မဟုတ် camper တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သဘောတူညီချက်ရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါ. ရုံကားများနှင့်တူ, RV ရဲ့အဆုံးရှုံးတန်ဖိုးကသူတို့စာရေး၏ချွတ်မောင်းနှင်နေကြတယ်ယခုအချိန်တွင်. ဒါပေမယ့်, သင်က purchasing အပေါ်စီစဉ်နေသော RV အကြောင်းအနည်းငယ်ဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်နေသဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
ဒီနေရာမှာတစ်ခု RV vin နံပါတ်စစ်ဆေး
ရုံကားများနှင့်တူ, RV ရဲ့ vin များ (မော်တော်ယာဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်းအရေအတွက်ကို) သူတို့ကတစ်ဦးအပေါ် RV များစွာကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တို့ကိုမပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနေကြတယ်. သူတို့ကများသောအားဖြင့်ကားတစ်စီးသူတို့ကိုရှိသည်မယ်လို့တူညီသောအရပ်ဌာန၌နေရာချနေကြတယ်, ရဲ့ Dashboard ပေါ်နှင့်သင်ကားရှေ့မှနျ၏ရှေ့မှတဆင့်ရှာဖွေနေကနေတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ကြဖြစ်သင့်. သို့သော်, ဒီအစဉ်အမြဲအမှုမဖြစ်. ထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်နဲ့ frame ကိုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများ၌သူတို့ကိုသွင်းထားပြုပါ. သင်သည်လည်းအဓိကပံ့ပိုးကူညီမှုအပေါ်ကြည့်နိုင်ပါတယ် (တိုင်ကီထောက်ခံမှု) , စတီယာရင်ကော်လံပေါ်, ယာဉ်မောင်းများသို့မဟုတ်ခရီးသည်တင်အိမ်တံခါးကိုသို့မဟုတ်အိမ်တံခါးကိုပို့စ်, နှင့်တစ်ခါတစ်ရံ firewall ကပေါ်. အဲဒီမှာစာရင်းသွင်းလျှင်သင်သည်လည်းကြည့်ဖို့ကို manual ပိုင်ရှင်တွေစစျဆေးနိုငျ, ဒါပေမယ့်အရေအတွက် RV အပေါ်ကြောင်းကိုကဲ့သို့အလားတူကြောင်းအတည်ပြုပေးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
ပိုင်ရှင်ကသူတို့ကိုရှိပါတယ်လိုလျှင်, သင်သည်လည်းဝယ်စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါ, ခေါင်းစဉ်နဲ့အာမခံ docs များ. အဆိုပါ vin ကို RV မှထူးခြားသည်, အဘယ်သူမျှမနှစ်ခုမှာမော်တာအိမ်ပြန်တပါးတည်းရှိ, ဒါကြောင့်သင် vin အရေအတွက်ကိုလက်ျာရနျအရေးကွီးက.
သင်က purchasing စဉ်းစားနေပါတယ်တစ်ကားကိုတစ်ဦး vin တက်ကြည့်ရှုလိမ့်မယ်လို့တူညီသောလမ်းအတွက်, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ခု RV vin စစ်ဆေးမှုများ run နိုင်ပါတယ်. ဤအစီရင်ခံစာကိုသင်မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်တိုင်ကမှနှငျ့ထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးမည်, ထုတ်လုပ်သူသူသည်သင်တို့ကိုပြောပြထားတဲ့ RV စကားဝှက်ကိုရှင်းလင်းဖေါ်ပြ, ဒါကြောင့် built နှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် enginge နှင့်ဂီယာသတင်းအချက်အလက်မှရွေးချယ်မှုများရှိရာ.
တစ်ဦး RV vin အရေအတွက်ကိုရှာဖွေရေး running အားဖြင့်သင်တို့လည်းအခြားအဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သောလျှင်အဖြစ် RV မတော်တဆမှုအတွက်အစီရင်ခံနှင့်မည်သို့ကျယ်ပြန့်ခဲ့သိရသည်. ကို RV လက်တို့ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုပါကလည်း odometer ပြဿနာတွေသို့မဟုတ်အလိပ်ကျောက်ကုန်းဖြစ်နိုင်သောရန်သင့်အားသတိပေးပါလိမ့်မယ်. ပိုင်ရှင်ချွတ်ပေးဆောင်မရှိသေးပါဘူးသော RV အပေါ်မဆိုဖြစ်နိုင်သောလီယန်ရှိတယ်လျှင်လည်းစာရင်းပြုစုကြလိမ့်မည်. စေပြီးကြောင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပြီမဟုတ်ဆိုသည့်အလားအလာပြန်လည်သိမ်းဆည်း၏တငျပွနိုငျ.
တစ်အသုံးအများဆုံး RV ဝယ်ယူတဲ့အခါတစ်ဦး RV vin လုပ်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်၏အချို့သောမိဿဟာယအဘို့စျေးပေါအာမခံသင်ကားလမ်းကဆင်းသင်ကိုယ်တိုင်အချို့အလားအလာရှိသောခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုကယ်တင်နိုင်မှာစစ်ဆေးနှင့်.